Tsotra ny marketing inbound | Indianapolis Web Design
Takelaka afovoany: Tsotra ny varotra miditra
Sabotsy 9 Novambra 2013 Alahady, Novambra 17, 2013 Lorraine Ball
Rehefa mieritreritra ianao fa mahay mandray an'ity zavatra marketing amin'ny Internet ity, dia misy buzz vaovao misongadina. Amin'izao fotoana izao, Inbound Marketing no manao ny dingana. Samy miresaka an'io daholo ny rehetra, fa inona izany, ahoana no hanombohanao, ary inona no fitaovana ilainao? Ny marketing inbound dia manomboka amin'ny fampahalalana maimaim-poana, atolotra amin'ny alàlan'ny fantsom-piarahamonina, fikarohana, na doka misy karama. Ny tanjona dia ny hampipoitra ny fahalianan'ny prospect ary hahatonga azy ireo hanao varotra ny mailaka, ary mety ny nomeraon-telefaona, ho an'ny atiny.
Ka aiza no manomboka?
miady amin'ny mpifaninana aminao ny mpifaninana aminao. Ny valinteninao dia mila manome azy ireo fampahalalana ampy fotsiny, (tsy mivarotra miharihary) mampiseho ny fahaizanao.
Mamorona ny atiny - Ny fisintomana dia misy endrika sy habe rehetra, ao anatin'izany ny workbooks sy ny checklist, ebooks, horonan-tsary, fisie audio na takelaka. Tsy mila lava be na be pitsiny izy io, fa fampahalalana ampy tsara ka ny fanantenana azo antoka dia ho voatosika hangataka antsipiriany bebe kokoa momba ireo zavatra tena tianao do amidio vola.
Ny pejy fitodiana Ny fampiroboroboana ivelany anao dia hitondra ny fifamoivoizana amin'ity pejy ity. Mety ho pejy iray amin'ny tranokalanao izy, lahatsoratra bilaogy amin'ny lohahevitra manokana sy mifandraika, na pejy fandraisana izay misy tanjona tokana: hahatonga ny olona hanakalo ny mailaka ho an'ny atiny manana URL manokana ho an'ny fampielezan-kevitra hahafahanao mandrefy ny fahombiazan'ny fantsom-barotra tsirairay sy ny tanjaky ny tahan'ny fiovam-ponao. Mba hananganana pejy fitobiana namboarina dia tena tianay ny Prémise plugin ho an'ny wordpress mitambatra amin'nyFormstack ho an'ny fanangonana data.
The Auto Responder Tsy izay rehetra mampakatra ny mombamomba anao anio no vonona hividy. Tsy midika izany fa tsy hividy amin'ny làlana izy ireo. Ny drafitrao dia tsy maintsy ahitana andianà fikasihana hijinja tombontsoa maharitra. Mampiasa ny endri-tsoratra autoreponder aoFormstack handefa mailaka, izay toa fanamarihana tsotra fotsiny isan'andro na roa aorian'ny fampidinana tany am-boalohany. Ireo fanamarihana ireo dia matetika miteraka resadresaka, hevitra ary fangatahana fampahalalana bebe kokoa. Tianay koa foana Contact ho fototry ny fampielezana drip lava.
Mitondrà fifamoivoizana miaraka amin'ny drafitra fampiroboroboana. Tsy voatery hahita tsy nahy ny pejy nataonao ny olona. Mizarà rohy amin'ny sehatra sosialy. Tsy maninona ny mangataka namana sy mpiara-miombon'antoka stratejika hizara ny rohy mankany amin'ny fiarahamonin'izy ireo raha te hanao toy izany amin'izy ireo ianao. (Ary tokony ho izany ianao). Raha manana programa mailaka mahazatra ianao, ampidiro ao koa ny rohy. Ity dia afaka manampy anao hahita prospect matotra ao amin'ny base data. Aza tototry ny safidinao loatra ny mpitsidika ny tranokalanao, fa ny manampy fiantsoana iray amin'ny ekipa, lohateny na bara an-daniny dia hitondra ny fahatsinjovanao liana amin'ny pejin-taninao. Tokony hampiasa PPC ve ianao handroahana ny fivezivezena mankany amin'ny pejin-tranonao? Miankina amin'ny fizotry ny varotrao izany. Raha manana paikady manokana ianao hanovana ny fifandraisana amin'ny causal amin'ny mpanjifa dia mety handoa ny fampiasam-bola amin'ny dokambarotra. Aza mampiasa PPC hananganana fahatsiarovan-tena amin'ny marika.
Ny mikasika manokana. Ny dingana mandeha ho azy dia manokatra ny varavarana, fa raha te hanana valiny tena izy ianao dia tokony haka ny telefaona ary hiresaka amin'ilay fanantenana. Hitan'izy ireo ve fa mahasoa ilay fampahalalana? Manana fanontaniana fanampiny ve izy ireo.
Ny varotra miditra dia tapany voalohany amin'ny fizotry ny varotra fa tsy ny fizotrany rehetra.
Te hianatra bebe kokoa? Ampidino ny takelaka misy antsika na jereo ny seminera anay amin'ny 20 Novambra. Amin'ny maha mpamaky an'i Martech Zone, ampiasao ny kaody fihenam-bidy: Mpanjifa13 ary manatrika tsy andoavam-bola.
Tags: mampihiditra barotratakelaka fivarotana inboundRoundpegFanampiana Hisaintsaina
Mafanafana ny varotra tarihin'ny data!
16 Nov 2013 tamin'ny 1:24 PM
Lahatsoratra tsara. Raha liana tamin'ny fahitana momba ny webinar aho.
Tsy mpankafy mitaky firaka mangatsiaka aho, izay mbola tsy mahalala anao, hanome nomeraon-telefaona anao hahazoana takelaka. Tonga dia nokapohiko ny bokotra aoriana. Tsy dia fantatro tsara ianao, ary tsy fantatrao tsara aho. Tsy tokony samy liana hiresaka an-telefaona isika roa.
Miaraka amin'ny adiresy mailakao, afaka nanohy ny fifandraisana ianao, nanasa ahy hamerina raha tsy vitako sns, sns. Sns ... Rehefa vonona ny hamela anao hiantso ahy aho dia mety ho noho ny fahitana fahalianana . Mpankafy nomeraon-telefaona tena vao maraina be aho raha tena fohy ny fizotry ny fanapahan-kevitra, toy ny fividianana fiara. Mbola tsy hanontany raha tsy ny pejy Misaotra, ka tsy manana ny adiresy mailaka aloha aho.
17 Nov 2013 amin'ny 8:32 maraina
Niady hevitra be tao anaty izahay momba ny mahatsara sy maharatsy ny nomeraon-telefaona. Nanao ny switch ho fitsapana izahay ary nahita ny valiny dia tsara. Vitsy kokoa ny vinavinay manam-pahaizana momba ny fisintomana ilay endrika.
Na dia tsy manoro izany paikady izany ho an'ny mpanjifa rehetra aza aho, dia miasa ho anay izany
16 Nov 2013 tamin'ny 1:27 PM
Ilay rohy 'jereo ny seminera anay' dia mitondra ahy mankany amin'ny pejy fidirana amin'ny Constant Contact?